Qabsaa’ota Oromoo abbaafi ilmaan ajjeefamanii ganna 28 oliif iddoo awwaalchaa dhorkaman – Ayyaantuu
[ September 22, 2021 ] TDF, Addis Zemen, Bahirdar, ENDF, ARSF	English
HomeAfaan OromooQabsaa’ota Oromoo abbaafi ilmaan ajjeefamanii ganna 28 oliif iddoo awwaalchaa dhorkaman
(BBC Afaan Oromoo) — Yeroon isaa bara 1984 A.L.I bara Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) Chaartara keessaa bahee gara qabsoo hidhannootti deebi’e ture.
Waraana ABO konyaa (Godina) Shawaa Lixaa keessa socho’u keessatti dabballeefi loltuu ta’uun qabsaa’aa kan ture dargaggoo Shaambal Damissee Hagayya 15 bara 1984 qe’ee warra isaa keessatti, abbaa isaa Obbo Damissee Habtegabri’eel Dhiinsaa waliin loltoota TPLF’n ajjeefaman.
Erga ajjeefamanii boodas reeffi isaanii akka hin kaafamneefi sirnaan akka hin awwaalamne dhorkaman.
Maatiin isaaniis sodaadhan qe’ee gadi dhiisanii bittinnaa’an. Namoonni muraasni ollaa turan sodaa guddaa keessa osooma jiranii qe’eedhuma isaaniitti bool’a tokkotti abbaafi ilma kana awwaalan.
Waggoota 28 booda lafeen qabsaa’ota kanaa qe’ee keessaa bool’a itti awwaalamee bahee kabajaan siidaan tolfameefi awwaalamanii jiru.
Odeessaalee walitti dhiyaatan kanneenillee dubbisuu maltan:
Qabsoo ABO’f aarsaa maatiin kaffale
‘Seenaa qabsoo suuraan ol kaa’uu’
MM Abiy ABO’f odeeffannoo miliqsuu dhaabichi mirkaneesse
‘Abbaa kootu qawwee bitee na leenjise’ qabsooftuu Ayishaa Mahaammad
Dargaggoon Shaambal Damissee Godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboo ganda baadiyyaa Kuree Gaattiraa jedhamtu keessatti akka dhalate seenaan isaa ni hima.
Kutaa 11 erga xumureen booda dargaggeessa ganna 19 ta’ee leenjii dabballummaafi waraanaa fudhatee ABO’tti kan dabalame dargaggoo Shaambal, yeroos ajajaa Waraana ABO konyaa Shawaa Lixaa kan turan nama Badhaadhaa Sarbeessaa jedhamu jalatti ijaaramuunis qabsootti turan.
Waraanni ABO Badhaadhaa Sarbeessaan hogganamu kun Hagayya 03 bara 1984 Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandii dirree Gololee jedhamu irratti lolli itti baname.
Yeroos meeshaa guddaa akka hidhataniifi baay’inaanis loltoota ABO akka caalan kan himame loltoonni TPLF, ajaja waraanaa Badhaadhaa Sarbeessaa dabalatee loltoota garii madeessuun yoo to’atu gariin achumatti wareegaman.
Badhaadhaa Sarbeessaa hanga har’aatti ajjeefamuufi lubbuun jiraachuun isaa hin beekamu.
Bool’a reeffi abbaafi ilmaa qotamee keessaa baafame
Shaambal Damissee dabalatee yeroos dabballee olaanaa dhaabichaa kan turan Injinar Gaaddisaa Abarraa loltoota kaan waliin miliqan.
Hogganaa isaafi miseensota isaa of biraa kan dhabe gareen waraanaa kun, irra deebiin of Ijaaruun irra ture jedhu Injinar Gaadisaa Abarraa.
Dargaggoo Shaambal Damissee yeroos deeggaraa qabsoo ABO kan turan abbaa isaa Obbo Damissee Habtagbri’eel mariisisuuf jecha, waahila qabsoo isaa tokko waliin gara qe’ee dhaloota isaa Kuree Gaattiraa deeme.
Eeruun kun kan isaan gahe loltoonni TPLF lakkoofsa hedduu ta’an qe’ee Obbo Damisseetti marsanii bulanii ganama dhukaasa irratti banan.
Siidaan haaraan ijaarameefi lafeen isaanii sirnaan awwaalameera
Waahilli qabsoo Shaambal wayita miliqu, Shaambal Damissee osoo ofirraa loluu wareegame. Ilma isaaniirra lola kan dhaqan abbaanis ilma isaaniirratti wareegaman.
Jarri lamaanuu qe’eedhuma isaaniitti bool’a tokko keessatti awwaalaman.
Maaliif qe’eetti awwaalaman?
Yeroos deeggaraafi miseensi ABO adamfamee gariin ajjeefamaafi gariin hidhamaa ture jedhu waahillan qabsoo Shaambal Damissee har’a lubbuun jiran.
Battala abbaafi ilmi ajjeefamanitti maatiin isaanii qe’ee gadi dhiisanii baqatan.
Afooshaawwan adda addaa keessaa akka baafamaniifi abbaa warraafi ilma isaanii sirnaan akka hin awwaallanne dhorkamuu isaanii haati Shaambal Damissee Aadde Daawwii Olaanaa ni himu.
Firriifi ollaan isaan baqatee ari’atamuu guddaaf saaxilamanii akka turanillee himu.
Hundaa ol ammoo reeffi abbaa warraa fi ilma isaanii awwaala dhabee waggoota 28’f qe’eetti awwaalamee turuun isaa isaan miidhuu dubbatu.
Lafeen qabsaa’ota kanaa Amajjii 12 bara 2020 qe’ee isaanii lafa itti awwaalamee bahee sirnaan siidaan hojjetameefi sirni awwaalcha isaanii raawwateera.
Yeroos firriifi ollaan bahee akka hin boonyeef dhorkamanis waggoota 28 booda akka haaraatti bahanii boohaniifi galaniiru.
Gudeeddaa daa’ima Oromoo ganna sagalii irratti RIB raawwatame
Gudeeddaa daa’ima Oromoo ganna sagalii irratti Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaan raawwatame Gudeeddaa daa’ima Oromoo ganna…
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Sadaasa 28, 2018 SBO SADAASA 28,2018. Oduu fi Gaaffii fi deebii…